छोरी जन्माएको १ घण्टामै आमाको मृत्यु, परिवारसँग शिशुका लागि दूध किन्ने पैसा समेत छैन ! - Sansar Dainik
October 30, 2020 adminLeaveaComment on छोरी जन्माएको १ घण्टामै आमाको मृत्यु, परिवारसँग शिशुका लागि दूध किन्ने पैसा समेत छैन !
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–४ की २३ वर्षीय अम्बकला रोकायाले पहिलो सन्तानका रुपमा छोरी पाइन् । तर, प्रसुती हुँदा भएको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण छोरी जन्माएको १ घण्टामै अम्बकलाको मृत्यु भयो ।
छोराले खुकुरी दिए आमाले छ’पकाइन,ढोका फुटायर छोराको अघि बला”त्कार गर्यो त्यसपछि यस्तो भयो-(भिडियो हेर्नुहोस)